Ku biir Isbahaysiga oo ayiddo Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda - Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Ku biir Isbahaysiga oo ayiddo Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku biirto isbaheysigayada hay'adaha iyo ururada taageerada waxbarashada nabadda!
Halkan guji si aad ugu biirto oo aad u oggolaato Ololaha shaqsi ahaan!
Adoo ku biiraya isbahaysigeenna isla markaana bixinaya oggolaansho hay'ad, waxaad gacan ka geysaneysaa bixinta caddaynta u doodista caalamiga ah ee waxbarashada nabadda. Ansixinta hay'aduhu waxay si gaar ah u xoogan yihiin markay codsi u dirayaan kuwa go'aamiya siyaasada waxbarashada, sidaa darteed fadlan ku soo biir isbahaysigayaga ururada iyo shabakada caalamiga ah ee xubnaha shakhsi ahaaneed adoo taageeraya Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda.
Halkan guji si aad u hesho liiska xubnaha isbahaysiga hadda jira iyo kuwa ansixinaya! Halkan guji si aad u hesho liiska xubnaha isbahaysiga hadda jira iyo kuwa ansixinaya!
Ku biirista isbahaysiga iyo bixinta oggolaansho waxay muujineysaa ballanqaadka himilada iyo yoolalka Ololaha Caalamiga ah:
Hadafka Ururka: Dhaqan nabadeed ayaa la gaari doonaa marka muwaadiniinta adduunka ay fahmaan dhibaatooyinka adduunka ka jira; uu leeyahay xirfad uu ku xaliyo khilaafka si wax ku ool ah; ogaadaan kuna noolaadaan heerarka caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha, jinsiga iyo sinnaanta jinsiyadda; qadariyo kala duwanaanta dhaqanka; lana ixtiraamo sharafta Dhulka. Barashada noocan oo kale ah laguma gaari karo hadaan si ula kac ah, waara loo helin loona habeyn waxbarasho nabadeed.
Goolal: 1) In la dhiso wacyiga bulshada iyo taageerada siyaasadeed ee ku aaddan soo bandhigida waxbarashada nabada ee dhammaan dhinacyada waxbarashada, oo ay ku jiraan waxbarashada dadban, dhammaan dugsiyada adduunka oo dhan. 2) In kor loo qaado waxbarashada dhammaan macallimiinta si loo baro nabadda.
Magaca Ururka / Hay'adda*
Waa maxay magaca ururkaaga ama hay'addaadu?
Fadlan xulo calaamadda sida ugu saxsan u sharraxaysa hay'addaada / hay'addaada.
Dugsiga Hoose ama SareJaamacad ama Kuleej (Barnaamijka, Xarunta, Machadka)Urur aan dawli ahayn (NGO ama wadaniga ah)NGO caalami ah (INGO)Urur Dowladeedkale
InternationalAfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntigua and BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Sint Eustatius iyo SabaBosnia iyo HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBrunei DarrussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral African RepublicChadChileShiinahaChristmas IslandCocos IslandsColombiaComorosCongo, Democratic Republic of theCongo, Republic of theCook IslandsCosta RicaIvory CoastCroatiaCubaCuracaoCyprusCzech RepublicDenmarkJabuutiDominikaDominican RepublicEcuadorMasarEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEswatini (Swaziland)ItoobiyaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFaransiis PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiQuduuska SeeHondurasHong KongHungaryIcelandHindiyaIndonesiaIiraanCiraaqIrelandIsraa'iilItalyJamaicaJapanUrdunKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanJamhuuriyadda Lao Dadka DemocraticLatviaLubnaanLesothoLiberiaLiibiyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaIslands MarshallMartiniqueMauritaniaMauritiusMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaKuuriyada waqooyiNorthern Mariana IslandsNorwayCumaanPakistanPalauPalestine, State ofPanamaPapua New GuineaParaguayPeruFilibiinPolandPortugalPuerto RicoQadarRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint HelenaSaint Kitts and NevisSaint LuciaSaint MartinSaint Vincent iyo Grenadines ahSamoaSan MarinoSao Tomé iyo PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaJasiiradaha SolomonSoomaaliyaKoonfur AfrikaSouth GeorgiaSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameIswidhanSwitzerlandSuuriyaTaiwanTajikistanTansaaniyaThailandTimor Leste-TogoTokelauTongaTrinidad and TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurkiga oo Caicos IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesBoqortooyada IngiriiskaUnited StatesUruguayJasiiradaha Yar ee MaraykankaUzbekistanVanuatuVenezuelaVietnamVirgin Islands, BritishVirgin Islands, USWestern SaharaYemenZambiaZimbabwe
Haddii aad siiso xiriiriye websaydhka hay'addaada, waxaan ku siin doonnaa xiriiriye websaydhkaaga boggayaga taageereyaasha urur.
Fadlan tixgeli inaad bixiso tixraac aqoonsi ah!
Maxay tahay sababta ururkaagu ugu biirayo isbahaysigeenna una ansaxinayo Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda? Maxay waxbarashada nabadda muhiim kuugu tahay adiga? '
* Xigashooyinka waxaa loo isticmaali karaa ujeeddooyin dhiirrigelin ah Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarshada Nabadda iyo joornaaladayada.
[Ereyga xaddidan: qiyaastii 100 erey / 700 xaraf]
Ururkaaga noo sheeg.
Waa maxay himilada ururkaagu? Waa maxay xiriirka ururkaaga iyo waxbarashada nabadda?
* Jawaabtaada waxaa lagu dhejin doonaa ururkaaga liiska aqbalitaanka.
Ururkaagu ma xiiseynayaa inuu door firfircoon ka ciyaaro Ololaha Caalamiga ah ee Waxbarashada Nabadda? Waxaan marwalba u furan nahay sahaminta iskaashiyo taageera dadaallada hadda, mashaariicda, iyo yoolalka Ololaha. (Haddii aad calaamadeyso sanduuqa hoose waxaan la socon doonaa dabagal si aan u baarno fursadaha jira.)
Haa - waxaan xiiseyneynaa iskaashi!
Macluumaadkan waxaa loo isticmaali doonaa oo keliya dabagalka isgaarsiinta mararka qaarkood lala sameeyo ururada ogolaada. Macluumaadka xiriirka ee la bixiyay lama shaacin doono.
Cinwaan ama Doorka Ururka*
Waa maxay cinwaankaaga ama doorkaagu ururka dhexdiisa?